Inguqulo entsha ye-IPFS 0.8.0 isivele ikhishiwe futhi yenza kube lula ukusebenza ngezikhonkwane | Kusuka kuLinux
Inguqulo entsha ye-IPFS 0.8.0 isivele ikhishiwe futhi yenza kube lula ukusebenza ngezikhonkwane
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ukwethulwa kwe- inguqulo entsha yohlelo lwefayela olusabalalisiwe IPFS 0.8.0 (I-InterPlanetary File System), okuyisitolo sefayela eliguqukile lomhlaba wonke elisetshenziswe ngendlela yenethiwekhi ye-P2P eyenziwe ngezinhlelo zamalungu.
I-IPFS ihlanganisa imibono esetshenziswe ngaphambilini ezinhlelweni ezinjengeGit, BitTorrent, Kademlia, SFS kanye neWebhu ukuthi ibukeke njengenduku eyodwa yeBitTorrent (ontanga ababambe iqhaza ekusatshalalisweni) beshintshana ngezinto zeGit. I-IPFS ibhekiswa ngokuqukethwe kunendawo nendawo namagama aphikisayo. Ikhodi yokuqalisa yokusebenza ibhalwe ku-Go futhi inikwe ilayisense yi-Apache 2.0 ne-MIT.
Kulabo abangajwayele i-IPFS, kufanele bakwazi lokho kulolu hlelo lwefayela isixhumanisi sefayela sihlobene ngqo nokuqukethwe kwaso futhi kufaka phakathi i-hash yokubhala ngokuqukethwe. Ikheli lefayela alikwazi ukuqanjwa kabusha ngokungemthetho, ingashintshwa kuphela ngemuva kokushintsha okuqukethwe. Ngokufanayo, akunakwenzeka ukwenza ushintsho kufayela ngaphandle kokushintsha ikheli (inguqulo yakudala izohlala kukheli elifanayo futhi entsha izotholakala ngekheli elihlukile).
Ukubheka ukuthi isihlonzi sefayela siyashintsha ngoshintsho ngalunye, ukuze singadlulisi izixhumanisi ezintsha isikhathi ngasinye, izinsizakalo zinikezwa ukuxhumanisa amakheli waphakade ebheka izinhlobo ezahlukahlukene zefayela (IPNS), noma usethe i-alias ngokufanisa ne-FS yendabuko ne-DNS.
Ngemuva kokulanda ifayela kusistimu yakho, umhlanganyeli ngokuzenzakalelayo uba elinye lamaphuzu okusatshalaliswa. Ithebula le-hashi elisatshalalisiwe (i-DHT) lisetshenziselwa ukucacisa ababambiqhaza benethiwekhi kuma-node lapho okuqukethwe yintshisekelo kukhona khona.
I-IPFS isiza ukuxazulula izinkinga njengokuthenjwa kwesitoreji ) .
1 Izici ezintsha eziyinhloko ze-IPFS 0.8
2 Ungayisebenzisa kanjani i-IPFS ku-Linux?
Izici ezintsha eziyinhloko ze-IPFS 0.8
Kule nguqulo entsha ikhono lokwenza izinsizakalo zangaphandle laqaliswa ukufaka idatha yomsebenzisi (phina - bopha idatha kunodi, ukuqinisekisa ukuthi idatha ebalulekile igcinwa). Imininingwane enikezwe insizakalo ingaba namagama ahlukile, ehlukile kusihlonzi sokuqukethwe (i-CID), ngakho-ke kungenzeka ukusesha idatha ngamagama nange-CID.
Ukucubungula izicelo zokulungisa idatha, I-IPFS Pinning Service API iyaphakanyiswa, engasetshenziswa ngqo kuma-go-ipfs. Kumugqa womyalo wokuphina, umyalo othi "ipfs pin remote" unikezwa.
Isistimu ephiniwe yakhiwe kabusha ukuyenza isheshe futhi iguquke kalula ngendlela elandela ngayo izikhonkwane. Okwabasebenzisi abasebenza ngezikhonkwane eziningi, lokhu kuzoholela ekukhuleni okukhulu kwejubane ohlwini nokuguqulwa kwesethi yezinto ezigxiliwe, kanye nokwehla kokusetshenziswa kwememori.
Ingxenye yokwakhiwa kabusha yakhelwe ukubheka amandla wokuxhumana nezikhonkwane bendawo ngendlela efanayo nathi manje esingaxhumana ngayo nezikhonkwane ezikude (isib. amagama, ukukwazi ukusetha i-CID efanayo izikhathi eziningi, njll.). Hlala ubheke izithuthukisi eziningi zokulungiselela.
Lapho kukhiqizwa izixhumanisi ze- "https: //" zamasango, kungezwe ikhono lokudlulisa amagama e-DNSLink kusetshenziswa izizinda ezingaphansi.
Izixhumanisi seziyasetshenziswa manje, lapho izinkathi zamagama woqobo zithathelwa indawo izinhlamvu "-" nezinhlamvu ezikhona "-" zeqa ngomunye umlingiswa ofanayo, futhi ukusekelwa kwephrothokholi ye-QUIC kwandisiwe. Ukukhulisa ukusebenza, ikhono lokukhulisa ukwamukela Kunikezwa ama-buffers e-UDP.
Okokugcina uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo mayelana nale nguqulo entsha, ungabheka imininingwane ku- isixhumanisi esilandelayo.
Ungayisebenzisa kanjani i-IPFS ku-Linux?
Kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukusebenzisa i-IPFS ohlelweni lwabo, bangakwenza lokho ngokulandela imiyalo yokuthi kuchazwe kabanzi kulesi sihloko.
I-IPFS: Ungayisebenzisa kanjani i-Interplanetary File System ku-GNU / Linux?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Kunconyiwe » Inguqulo entsha ye-IPFS 0.8.0 isivele ikhishiwe futhi yenza kube lula ukusebenza ngezikhonkwane
IPinePhone izosebenzisa iManjaro ngokuzenzakalela nge-KDE Plasma Mobile
I-Dapr, isikhathi sokusebenza esivulekile somthombo esivumela ukwenziwa kwezicelo zomdabu efwini